कस्तो होला करिश्मा राजनीति ? – Saurahaonline.com
कस्तो होला करिश्मा राजनीति ?
काठमाडौँ, २ माघ । मार्टिन लुथर किङले भनेका छन्, ‘एउटा यस्तो समय आउँछ, जुन समयमा स्थान लिनुपर्छ । त्यो सुरक्षित हुँदैन, ख्यातिप्राप्त हुँदैन, बौद्धिक हुँदैन । तर सही र गलत छुट्याउन स्थान लिनैपर्छ ।’ मार्टिन लुथरको यस भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको जीवन । उनी जीवनको फरक बाटामा छिन् । उनी हिँडिरहेको जुन बाटो छ, सुरक्षित छैन । ख्याति उनलाई आवश्यक छैन, बौद्धिकता अनुभवमा छ, अध्ययन जारी राखेकी छन् ।
नयाँ शक्ति नेपाल घोषणापश्चात्को केही दिनमा करिश्माले राजनीतिमा छिर्नुको सूक्ष्म कारण खुलाउँदै टिप्पणीकारसँग भनिन्, ‘कसैले नयाँ राजनीतिको काम गरेनन् । तर, डा. बाबुराम भट्टराईले सुरू गरे । यो प्रयासमा साथ दिएकी हुँ । दिइरहन्छु ।’
राजनीतिक रूपमा पूर्ण परिवर्तन नभई समाजको कुनै पनि अङ्गको चरित्रमा परिवर्तन नआउने बुझाइ त्यसैबेला उनमा थियो । त्यसकारण नयाँ र विकल्पको गतिमा हिँडेको बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपाललाई उनको साथ बलियो रह्यो । उनी राजनीतिक विचलनमा अहिलेसम्म परेकी छैनन् ।‘मैले अवसरका लागि राजनीति गरेकै होइन, परिवर्तनका लागि गरेकी हुँ,’ करिश्मा भन्छिन्, ‘जुन उद्देश्यको बाटामा निरन्तर हिँड्न सकिँदैन, त्यस बाटोमा किन लाग्ने ?’
अभिनयबाट राजनीतिको यात्रामा प्रवेश गरेका कैयौँ कलाकारको दलबदलको चरित्र उनमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । अवसर पनि नआएको होइन । तर, करिश्माले मानिनन् । अभिनेत्री रेखा थापा माओवादी, राप्रपा हुँदै राप्रपा नेपालमा पुगिन् । कोमल वली राप्रपा केन्द्रीय सदस्य पद छोडेर एमाले छिरिन् ।
भुवन केसी एमाले हुँदै सक्रिय राजनीतिमा आउने सोच बनाए तर एकाएक निस्क्रिय भए । तर, करिश्माले जब राजनीतिको लगाम बाँधिन् न उनले दलबदलको अवसर रोजिन,् न त अवसरको खोजी नै । बरु, सोचलाई कसरी स्थापित गर्ने भनेर सङ्गठन संरचनाको विकास, विवेचना र विस्तारमा निरन्तर अभ्यास जारी राखिन् । ‘हामी जुन बाटो हिँडेका छौँ, त्यसको गन्तव्य सुन्दर छ । डा. भट्टराईको सपना साकार हुँदा पुरै देशको सपना साकार हुने विश्वास मैले देखेकी छु,’ करिश्माले भनिन्, ‘त्यसकारण म निरन्तर सक्रिय छु ।’
निर्वाचनमा पार्टीका लागि चुनावी प्रचारदेखि पार्टी हारको कारणबारेको समीक्षा बैठकसम्ममा आफूलाई निरन्तर सक्रिय राखिन् । करिश्माले राजनीतिमा अस्थिर सोच र गन्तव्यसम्म पुग्नुपर्ने बाटो निक्र्यौल हुनुपर्ने बताइन् । तीन दशकभन्दा बढी नेपाली फिल्म उद्योगमा यही सोच र गतिका साथ काम गरिन् । यही कारण उनलाई अहिले पनि ‘सदाबहार सुन्दर’ अभिनेत्री भन्ने गरिन्छ ।
तर, राजनीतिमा चर्चाभन्दा आलोचना धेरै हुन्छ भन्ने विषय हेक्का राखेरै छिरेकी करिश्माले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा मेरो आलोचना नभएको होइन, हरेक प्रकारका विषय आउँछन् । तर, भविष्य सुन्दर बनाउन हिँडेको बाटोमा ससाना काँडा त भइहाल्छन् नी !’
सौन्दर्यको उद्योगबाट सिधै फोहोरी खेलतिर छिरेको भनेर कतिपयले भने । तर, उनले त्यसलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबोध गरेको उत्तर दिन्छिन् । समाजका चलेका अनुहार, मानेका मानिसले नै राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने करिश्मा भन्छिन्, ‘आउने पिँढीको सुन्दर भविष्यका लागि राजनीति गर्न आवश्यक छ ।’